शेयर लगानीकर्ताको व्यक्तिगत विवरण गैरकानुनीरूपमा कब्जा गर्न चलखेल
शेयर लगानीकर्ताको व्यक्तिगत विवरण गैरकानुनीरूपमा कब्जा गर्न चलखेल कसले साथ दिइरहेको छ चन्द्र टण्डनलाई ?
अरुण सापकोटा बिहीबार, असोज २२, २०७७, ०७:०९
काठमाडौं-नेपाल स्टक एक्सचेन्जले सञ्चालन गरिरहेको ट्रेडिङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टिएमएस) मा पटक-पटक समस्या आएपछि ब्रोकरहरू आफ्नो खर्चको भार घटाउन माफियाको शरणमा पुगेका छन्। ब्रोकरहरु आफैँले तयार पार्नुपर्ने 'टिएमएस' निर्माणका लागि गैरकानुनीरूपमा नयाँ कम्पनी खडा गर्ने तहमा पुगेका हुन्।
यसमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानासहित राजनीतिक पहुँच भएका कम्पनीको पनि संलग्नता रहेको छ। अध्यक्ष ढुङ्गानाले ग्रिन सिग्नल दिएपछि टिएमएसका लागि छुट्टै कम्पनी खोल्ने प्रकृया अगाडि बढेको हो। टिएमएस प्रणाली विकासका लागि भन्दै शेयर बजारसँग असम्बन्धित व्यक्तिको संलग्नतामा कम्पनी खोलिएको हो।
अहिले कम्पनीको पर्दामा सिटी एक्सप्रेसका सञ्चालक चन्द्र टण्डन देखिए पनि यसका पछाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट केही व्यक्तिको संलग्नता रहेको स्रोतको दाबी छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जले नयाँ अनलाइन प्रणाली ल्याउँदा नै ब्रोकरहरूले आफ्ना ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण तथा कारोबारको प्लेटफर्मका लागि टिएमएस र व्याक अफिस बनाउनु पर्ने संझौता थियो।
तर करोडौ रुपैयाँ लाग्ने भएपछि ब्रोकरहरुले टिएमएस पनि नेप्सेलाई नै बनाइदिन अनुरोध गरेका थिए। नेप्सेले वाइकोको सहयोगमा टिएमएस निर्माण त गर्‍यो तर यसमा सुरुवाती अवस्थादेखि नै समस्या आयो। यही समस्यालाई लिएर अर्थ मन्त्रालयसम्म छलफल भयो। मन्त्रालयले नेप्सेलाई यस्तो समस्याको समाधान गर्न पटकपटक निर्देशन दियो तर पूर्णरूपमा समाधान भने अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन।
यसबाट बोर्डका अध्यक्ष पनि त्यति सन्तुष्ट थिएनन्। यसको समाधानका लागि अध्यक्षले ब्रोकरसँग पटक-पटक छलफल गरे। यसै अवधिमा ब्रोकरले केही माफियाको प्रलोभनमा परेर कम्पनी खोल्ने निर्णय गरेका हुन्। यसमा शेयर बजारमा प्रविधिका माध्यमले भोलिका दिनमा लाभ लिन सकिने सम्भावनालाई नजिकबाट नियालेका व्यक्तिहरु बढी सक्रिय छन्।
'अहिलेका लागि टिएमएसको सफ्टवेयर निर्माण गरेर सञ्चालन गर्नु खासै ठूलो कुरा नहोला तर यसले भोलिका दिनमा ल्याउन सक्ने जोखिम सबैभन्दा धेरै हुन्छ,' नेपाल स्टक एक्सचेन्ज स्रोतले भन्यो, 'अहिले आफैँले खर्च गरेर प्रणाली दिने भोलि गएर त्यही प्रणालीलाई हतियार बनाएर अर्बाैं रुपैयाँ कमाउने योजना नै शेयर बजारका लागि घातक छ।'
दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीको सम्पूर्ण लगानीकर्ताको तथ्याङ्क ब्रोकरसँग हुन्छ। उनीहरूले दोस्रो बजारमा कारोबार गराउने भएकाले एक चरणको सम्पूर्ण तथ्याङ्क ब्रोकरहरुको ब्याक अफिसमा रहेको हुन्छ।
यस्ता तथ्याङ्क लगानीका बेलामा बाहेक ब्रोकरहरूले बाहिर सार्वजनिक गर्न तथा कसैलाई पनि सूचनाको रुपमा दिन पाउँदैनन्। तर ब्रोकरभन्दा बाहिरका व्यक्तिले लगानी गरेको कम्पनीलाई साझेदारको रूपमा भित्र्याउँदा लगानीकर्ताको सूचना बाहिरिन सक्ने जोखिम धेरै छ।
हरेक लगानीकर्ताको कारोबारको विवरण टिएमएस सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले सजिलै थाहा पाउन सक्छ। उसको पहुँच ब्रोकरको ब्याक अफिससम्म पुग्ने भएकाले कुन लगानीकर्ताको कति शेयर छ भन्नदेखि लिएर कुन लगानीकर्ताले कुन कम्पनीको शेयर कसरी किनिरहेको छ भन्ने सूचना पाउन सक्छ। दोस्रो बजार सूचनाको व्यापार हो। यसबाट केही माफियाले सूचना थाहा पाएर बजारबाट अनुचित लाभ लिन सक्छन्।
यसरी माफियालाई टिएमएस सञ्चालका लागि कम्पनी खोल्न अनुमति दिँदा दुई वटा जोखिम हुने नेपाल धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारी बताउँछन्। अहिले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको टिएमएसमार्फत् कारोबार गर्दा सम्पूर्ण जोखिम एकै ठाँउमा केन्द्रित भयो भनेर आलोचना हुने गरेको छ।
फेरि पनि ब्रोकरले एउटा कम्पनी खोलेर त्यहीबाट टिएमएस सञ्चालन गर्दा नेप्सेमा देखिएको समस्या अर्को कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्नेबाहेक अर्को कुनै काम नहुने ती अधिकारीको भनाइ छ।
'अर्को जोखिम सम्पूर्ण लगानीकर्ताको विवरण माफियाको हातमा सजिलै पुग्छ। यो सबैभन्दा घातक छ। टिएमएस तथा ब्रोकरको व्याक अफिसमा लगानीकर्ताको व्यक्तिगत विवरणका साथै उनीहरूको लगानीको पोर्टफाेलियो देखिन्छ,' धितोपत्र बोर्डका ती अधिकारीले भने, 'साथै उनीहरूले बेलाबेलामा गरेको लगानीको विवरण बाहिरिन सक्ने जोखिम उच्च रहन्छ। यस्तो तथ्याङ्क माफियाले विदेशीको हातमा पुर्‍याउन सक्ने जोखिम त छँदैछ।'
हिजोका दिनमा कागजी प्रमाणपत्र हुँदा त कयौँ गैरकानुनी घटना भएका थिए। भोलि माफियाको हातमा लगानीकर्ताको विवरण पुग्दै गर्दा ह्याकिङ गरेर अनुचित कारोबार नहोला भन्न नसकिने ती अधिकारी बताउँछन्। 'लगानीकर्ताको बायोमेट्रिक व्यक्तिगत विवरण ह्याक गरेर शेयर कारोबार भयो भने को जवाफदेही हुने?' उनले भने।
शेयर लगानीकर्ताको विवरण माफियालाई दिने गरी संरचना तयारबुधबार, असोज २१, २०७७
भन्सार विभागको महानिर्देशकमा भुसाल, विमानस्थल भन्सार प्रमुख पनि फेरिए भूसाल यसअघि मन्त्रालयकै आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख थिए। उनको ठाउँमा सहसचिव डा रामप्रसाद घिमिरेलाई ल्याइएको छ। घिमिरे मन्त्र... शुक्रबार, फागुन १४, २०७७
नेपालले कार्बन सञ्चितिबापत पाँच अर्ब पाउने नेपालले वन संरक्षणमार्फत उत्सर्जन घटाई कार्बन सञ्चिति बढाएबापत करीब पाँच अर्ब रकम पाउने भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा व... शुक्रबार, फागुन १४, २०७७
आर्थिक ऐनले दिएको छुट सुविधा उपयोग गर्न आग्रह रासस